I-Ocean ecobrick | Ecobricks.org
Ukwethulwa kwesisombululo samaplastiki olwandle ...
Ukwethulwa kweOcean Ecobrick
Udonga olwenziwe ngezinkulungwane ze-ecobricks ezigcwele ipulasitiki yolwandle e-Gili Trawangan, e-Indonesia.
I-Ocean Ecobrick yisigaba esisha se-ecobrick esenzelwe ikakhulukazi ama-plastiki atholakala emabhishi, emifuleni naselwandle. Lezi plastiki zivame ukuba zinkulu, zikhuni, zingcolile, zimanzi futhi azifanelekile ukwenza i-ecobrick evamile. Inqubo ye-Ocean Ecobrick yenza lezi zeplastiki zishintshwe kalula zibe isakhiwo esiwusizo, esiwusizo nesebenzisekayo.
Ukwenza I-Ocean ecobrick
Ukwenza i-Ocean Ecobrick (OEB) ngokuqondile-akukho amathuluzi akhethekile, imishini noma amakhono adingekayo. I-OEB ibalulekile amabhodlela amabili, ukusika, okupakishwe ngepulasitiki, bese ubeka phansi uphawu oluphansi. Ngokusika phezulu ibhodlela, omunye wenza ukuvuleka okubanzi ukupakisha ama-plastiki acwebile, amakhulu futhi aqinile atholakala ogwini. Ukuze ubhekwe phansi kanye nephezulu ye-OEB sisebenzisa ipulasitiki ‘yesiliva’ kusuka ku-chip wrappers nezinye ukudla okungenamsoco. Le plastiki oxide ipulasitiki iveza ukukhanya kwelanga, futhi ingenye yama-plastiki ahamba kancane kunayo yonke isithombe. Ithimba elilula le-bamboo lisetshenziselwa ukupakisha ibhodlela eligcwele futhi liqinile ngangokunokwenzeka kwepulasitiki yolwandle. Uma isezansi ingu-80% ephelele, i-top is silvered, bese iphakanyisiwe i-30% ephelele. Ukupakisha okungaphezu kwalokhu kuzokwenza kube nzima ukujoyina phezulu kanye phansi ndawonye kamuva.
ukuvala uphawu I-Ocean ecobrick
I-Ocean Ecobrick ivaliwe ivaliwe ngokucindezela ndawonye futhi iphikisana ngokuqinile phezulu nangaphezulu. I-Ocean Ecobrick ayifani ne-ecobrick evamile njengoba ingavaliwe emoyeni. Lokhu kubalulekile njenge-OEBs ezenziwe ngamapulasitiki amanzi anesilonda okuzogcina ekukhiqizeni i-methane. Ukungabi nalutho phakathi kwamabhodlela amabili amabili, ukuvumela igesi ukubaleka, ukugwema izingozi zokubuthelwa kwegesi (yingakho i-ecobricks evamile eyenziwa ngepulasitiki ehlanzekile neyomile).
I-Ocean Ecobicks ingasetshenziselwa ukwakhiwa kwe-cob yangaphandle, njengezikhala eziluhlaza, noma ngisho izindonga nezinhlaka. Isisindo sesiliva kanye namabhodlela, angashiywa evezwe ukuze kusize ukunciphisa ukumiswa kwamathambo. Bheka Umbono Wokwakhiwa kwe-Ecobrick Wokwaziswa ngemininingwane yomhlaba we-Earth Ecobrick. Bheka ikhasi lethu lokwakha i-cob, ukuze ufunde ukuthi ungafaka kanjani ama-OEB ukusebenzisa ngendlela efanayo ne-ecobricks ejwayelekile, ukwakha ibhentshi engadini yangaphandle.
Ngokungafani ne-Ecobricks yendabuko, i-OEB yakha imfucuza ekwenzeni kwabo. Amabhodlela kufanele ahlulwe, futhi ama-topps ebhodlela nama-caps asele. Qaphela ukuthi nakuba kunqunywe, iziqongo nama-caps zisengabuyekezwa kabusha. I-PET ne-HDPE yiyona efunwa kakhulu ngemva kwama-plastiki. Emazweni amaningi eNingizimu East Asia lezi zizoqoqwa ngabakwa-recyclers. Uma kuqhathaniswa ne-ecobricks ejwayelekile, i-Ocean Ecobricks iyingozi kakhulu, ifakazekile futhi ingenhle kakhulu kune-Ecobricks ejwayelekile. Kungenzeka ukuthi amaplastiki angaphakathi ayoba angcolile futhi ahlambalaza. Awufanelekile ngokwenza amamojula noma i-lego- kuphela ye-cob noma i-Pura Vida Atlanconstruction. Noma kunjalo, i-Ocean Ecobricks ihlala isisu. I-Ocean Ecobricks, njengoba isebenzisa ipulasitiki yokudoba olwandle ayifuni ukuqonda njengama-Ecobricks ajwayelekile-azinikele ekuguquleni imfucuza yomuntu siqu. Ngakho-ke, i-Ocean Ecobricks ihle kakhulu kuphela ezimweni zomphakathi wohlu olwandle olugcwele ngokwepulasitiki.
Ukuthuthukiswa nokwakhiwa kwe-Ocean Ecobrick kusasebenza. Bona okuphakelayo ngezansi kwe-OEB kwenziwa emhlabeni jikelele. Hlala uthunyelwe!
Udonga olwenziwe ngezinkulungwane ze-ecobricks ezigcwele ipulasitiki yolwandle e-Gili Aire, e-Indonesia.
Ukudla kwe-Ocean Ecobricks njengengene ku-GoBrik
[fbbutton] The community of SMKN Widang and Kristiana are making ecobricks to go zero waste and build cool stuff. Kristiana used a 600ml Aqua bottle to pack 268g of home plastic to make her number 3 ecobrick. Based in the city of Tuban, Jawa Timur they are...
I-OEB isisombululo esilula sezingcolile, izinhlanzi, ezingekho-bios ezivame ukutholakala ogwini noma olwandle. I-Ocean Ecobrick yaqala ukuqaliswa esiqhingini saseSalen, e-East Java, e-Indonesia yiqembu le-GEA.